Urur siyaasadeedka Midnimo oo dhalliilay guddiga KMG ee doorashooyinka Puntland – Radio Daljir
Febraayo 22, 2013 1:31 b 0
Bosaso, Feb 21 – Urur siysaadeedka Midnimo oo ka mid ah lixda urur siyaasadeed ee kasoo gudbay wajiga koobaad ee diiwaangalinta ururada siysaadda ee Puntland ayaa dhaliilay habka shaqo ee guddiga KMG ee doorashooyinka Puntland.
Warsaxaafadeedka ururka uu soo saaray ayaa u qornaa
Ref:MPA/SO/001/2013- 20 February 2013
Ujeedo war saxaafadeed
Hannaanka xisbiyada badan ee Puntland laga dhaqan-geliyey, wuxuu soo dhaweyn ka helay inta badan dadka reer Puntland. Ururka midnimo-na wuxuu ka mid yahay ururrada siyaasadeed ee loo dhisay ka qayb-qaadashada hanaan siyaasadeed oo ku dhisan tartan xor iyo xalaal ah.
Kuma jirto qorshayaasha ururka Midnimo in uu ka qayb-qaato is-qab-qabsi iyo qalalaase siyaasadeed oo khatar gelin kara nabadgelyada guud iyo jiritaanka Puntland.
Ururku wuxuu go?aansaday inuu raaco hab-raac sharci ah, kaasoo suurtogelin kara in hogaanka dalka si hufan loogu tar-tamo. Balse, waxaa jira caqado badan oo ragaadin kara gaarista yoolkaas la wada hiigsanayo, kuwaasoo ka imanaya habsami u raacista heshiisyada iyo xeerarka la ansixiyey iyo saamaynta (influence) dawladdu ku leedahay Guddiga Madaxabanaan ee Kumeel-gaarka ah Doorashooyinka Puntland.
Ugu horayn, guddiga doorashooyinku kuma guuleysan inay xeerarka iyo habraacyada ay umadda u soo bandhigeen u raacaan sidii ay ugu talo galeen, ururrada siyaasadda ee mucaaradka ahna lama siin fursad ay taladooda ku gudbiyaan sida ku cad qodobadan soo socda.
1. Tubtii Khariidadda (road map) ee ay sameeyeen waxaa ku dhacay isbedel dhamaystiran. Tusaale ahaan, xeerka doorashada xubnaha baarlamaanka ee la qorsheeyey in la ansixiyo inta ka horaysa 15 Janaayo 2013, ilaa iyo hadda lama unkin.
2. Gudiga doorashooyinku waxay ururada ku wargeliyeen in ay shirar-kooda qabsadaan inta ka horaysa 5-ta Feb, 2013. Balse, ururada qaarkood ayaa shirar-koodii qabsaday 18-kii February 2013 iyo ka dib, iyagoo sakhiraad ka helay guddiga doorashada.
3 Diiwaangelinta taageerayaasha ururrada siyaasadda ee la qorsheeyey inay soo geba-gabowdo 6:00 PM ee maalinta bisha Febaraayo tahay 9-ka, ayaa noqotay mid maalmo dheeri ah qaadatay. Taasoo muujinaysa in ururada qaarkood loo fidiyey waqtiga diiwaangelinta, halka ururada qaarkoodna hal maalin keliya la siiyey.
4. Sida ku cad jadwalka guddiga doorashooyinku soo gudbiyey isla markaasna ay mar labaad 16-kii Feb E-mail ugu direen ururrada, waxaa loo baahnaa in urur walbaa keeno dadkii taageerayaashiisa ahaa ee loo diiwaangeliyey, guddiguna waxay ahayd inuu ka hubiyo, ururkii buuxin waayana la reebo. Hase ahaatee, guddigu waxuu 18-kii bisha ku wargeliey ururrada in la joojiyey hubintii. Taasoo loo fahmi karo ururro gaar ah loogu xaglinayo, kuwaasoo aysan u suuroobi kari lahayn keenista dadkii u diiwaangashannaa.
Waxaa jirey arrimo badan oo ay ahayd in la fuliyo ama la dhammaystiro ka hor inta aan loo dareerin doorashada golayaasha deegaanka. Sida:
Tirakoobka dadka Puntland,
Samaynta kaararka aqoonsiga,
Kala xadaynta degoomiynka cusub iyo kuwii hore
iyo weliba dhismaha maxkamad dastuuri ah oo illaalisa dastuurka iyo xeerarka dalka, go?aanna ka gaarta dacwadaha dastuuriga ah.
Lamana garanayo sida arrimahaas loogu qaban karo waqtiga kooban ee ka haray xilligii guddiga doorashooyinku u qabteen qabashada doorashada golayaasha deegaanka.
Waxa intaas raaca, waxaa jira xeerar badan oo loo baahnaa in la sameeyo ka hor doorashooyinka. Balse waxaa dhacday in golihii xukuumada iyo kii baarlaamka ee ansixin lahaa xeerarkaas ay badankoodu ka mid noqdeen mid ka mid ah ururrada siyaasadda ee hadda jira. Haddaba waxaa la isweydiin karaa xeerka hadda ay sameeyaan ma wuxuu noqonayaa mid u daneeya dadka Puntland oo dhan mise wuxuu noqonayaa mid u daneeya ururkooda.
Waxaa xusid mudan in guddiga doorashada ee hadda jira ay soo magacaabeen madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka kuwaasoo hadda ah xubnaha ugu sareeya ee xisbigooda.
Intaa waxaa dheer, waxaan ka warhelnay in la rabo in la laalo (La tir-tiro) labo qodob oo ku jirey xeerkii golayaasha deegaanka ee hore loo ansixiyey. Sida qodobka ka hadlaya in qofka codka bixin karaa yahay qof muwaadin reer Puntland ah, da;diisuna aysan ka yarayn 18 jir oo haysta warqad aqoonsi ah. Kan labaadna yahay, in doorashada lagu galo iyadoo aysan jirin diiwaanka codeeyayaasha. Haddaba waxaan u aragnaa in labadaas qodob ay saldhig u yihiin dhicitaanka doorasho xor iyo xalaal ah, ka saaridooduna ay u gogol xaarayso ku shubasho, cod gadasho iyo boob. Sidaas awgeed waxaan caddaynaynaa in haddii qodobadaas la saaro aannaan qayb ka noqonayn doorasho musuqmaasuq ku dhisan, taasoo khatar gelin karta ammaanka guud ee dalka iyo jiritaanka.
Afhayeenka ku meelgaarka ah ee Ururka Midnimo
Caawa iyo Daljir, Sabti, Feb, 23 Cabdirisaaq Cali Cabdi ‘Silver’ ( Daljir Galkacyo)